Itoobiya: Somaliland iyo Puntland waxaan u aqoonsannahay inay hoostagaan Soomaaliya - BBC News Somali
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya, Nebiyat Getachew, ayaa BBC u sheegay in "Puntland iyo Somaliland ay u aqoosan yihiin in ay hoostagaan dowladda federaalka ee Soomaaliya".
"Waxaan safaarad ku leenahay Muqdisho. Somaliland iyo Puntland waxaan ku leenahay xarumo diblumaasiaydeed", ayuu sheegay afhayeenka.
"Boggeena arrimo badan ayaa ka muuqdo waana eegeynaa", ayuu hadalkiisa ku daray.
Jamhuuriyadda Iskeed ugu Dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland ayaa sheegtay in ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale, balse aqoonsi caalami ah wali ma helin.
Khaladaadkii ka muuqday khariidaddii Itoobiya oo sidii loo qaatay ka baaxadwayn
Dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa horey u sheegtay "in ay ka faa'ideyso isbedelka siyaasadda ee geeska Afrika".
Yusuf Garaad oo ahaan jiray Wasiirka arrimaha dibadda ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in "dowladda Soomaaliya aysan ka aamusin arrintan".
Danjire Ciid Bedel oo ahaan jiray safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada Midoobay oo dhowaan la hadlay BBC-da ayaa sheegay, "Siyaasaddan waa siyaasad ka horeysay Dr Abiy Axmed. Siyaasaddan waxaa dajisay dowladdi Meles Zenawi. Siyaasaddeedi ku wajahnayd Soomaaliyana waxay ahayd iney Soomaaliya kala qaybiso, inteeda badanan Itoobiya lagu daro, inta soo hartana ama Kenya lagu daro ama wixii kale ee laga sameyn karo laga sameeyo."
"Run ahaantii waxaan aad uga xunnahay jahwareerka iyo faham la'aanta ka dhashay dhacdadaas" ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda.